Qarax is miidaamin ah oo ka dhacay Gobolka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax is miidaamin ah oo ka dhacay Gobolka Mudug
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la doonayay in lagu weeraro xero ciidanka Daraawiishta Galmudug ku leeyihiin duuleedka Bacaadweyn ayaa la fashilyay isaga oo aan gaarin yoolkiisii.
Bacaadweyn, Soomaaliya - Ciidamada Dowladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug ee ku sugan duuleedka degaanka Bacaadweyn ee koofurta Gobolka Mudug, ayaa fashaliyay qarax is-miidaamin ah oo nafti-hallige ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu doonayay inuu la beegsado xero ciidan.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan daraawiishta Galmudug, ciidamada ayaa toogtay is-miidaamiyaha, ka hor inta uusan gaarin yoolkiisii, taas oo keentay in gaarigu ku qarxo goob ka durugsan xarun ay ciidanku dhawaan ka sameysteen duuleedka Bacaadweyn.
Sida ay wariyeen ilo lagu loo qaateen ah, ma jiro wax khasaaro ah uu sababay qaraxa, mana jiro wax war rasmi ah oo labada dhinac ka soo saareen weerarka la fashiliyay aroortii hore ee saaka.
27-kii bishii hore ayay ahayd markii ay Al-Shabaab, gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku weerareen degaanka Wisil ee Gobolka Mudug, ka hor inta uusan dhicin dagaal xooggan oo saacado qaatay.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa Lixdii bishaan la wareegay Bacaadweyne, hayeeshee, dib ayay uga soo baxeen isla taariikhdas, kadib dagaallo kharaar oo ka dhacay tuulooyinka Qaycad iyo Sabeeno-gawrac oo degaanka hoos yimaada.
Abaabul ciidan ayaa ka socda Mudug, kaas oo maamulka Galmudug, uu ku doonayo inuu iska dul qaado, culeys xooggan oo Kooxda Al-Shabaab ay saareen degaannada maamulkaas, ku dhawaad labadii sano ee la soo dhaafay.